Isithombe Esibunjiweyo IXi'an isendaweni yokuqala uMgwaqo omkhulu weSilika. Ehlelweni lokucwaninga lobuciko, bahlanganisa ubunjalo besimanje bohlobo lwehhotela iXi'an W, umlando namasiko akhethekile kaXi'an, kanye nezindaba zobuciko ezimangalisayo zoThingo LwamaTang. I-Pop ehlanganiswe nobuciko be-graffiti baba yizwi lobuciko behhotela le-W elaba nomthelela omkhulu.
Yong Kabusha Kwechweba
Lwesithathu 15 Septhemba 2021
Yong Kabusha Kwechweba Lesi siphakamiso sisebenzisa imiqondo emithathu ukwakha kabusha uhlelo lwe-CI lweYong-An Fishing Port. Owokuqala ilogo entsha yokudala enezinto ezibonakalayo ezikhethekile ezikhishwe ezimweni zamasiko omphakathi waseHakka. Isinyathelo esilandelayo ukucwaninga kabusha kwesipiliyoni sokuzijabulisa, bese udala izinhlamvu ezimbili ze-mascot ezimele futhi uvumele zibonakale ezinhlelweni ezintsha zokuqondisa izivakashi ethekwini. Okokugcina, ukuhlela izindawo eziyisishiyagalolunye ngaphakathi, ezizungeze imisebenzi yokuzijabulisa nezidlo ezimnandi.
Umbukiso Ukwakhiwa Ngo-2019, iphathi ebonakalayo yemigqa, ama-chunks anemibala, ne-fluorescence kwakhanyisa iTaipei. KwakuyiTape That Art Exhibition ehlelwe yiFunDesign.tv neTape That Collective. Amaphrojekthi ahlukahlukene anemibono namasu angajwayelekile alethwa ukufakwa kobuciko beteyipu engu-8 futhi abukisa ngemidwebo engaphezu kwamashumi amane, kanye namavidiyo womsebenzi wabadwebi owedlule. Baphinde bengeza imisindo ekhanyayo nokukhanya ukwenza umcimbi ube yimbumbulu yobuciko futhi izinto abazisebenzisa zazifaka ompompi bezindwangu, ompompi be-duct, ompompi bephepha, izinganekwane zokufaka, amateyipu epulasitiki kanye nama-foil.
Msombuluko 13 Septhemba 2021
I-Salon Yezinwele Ithatha umnyombo wesithombe se-botanical, ingadi yesibhakabhaka yadalwa kuyo yonke indlela, yemukela ngokushesha izivakashi ukuba zizolala ngaphansi, zihamba eceleni kwesixuku, zibamukele ekungeneni. Ukubhekabheka esikhaleni, ukwakheka okuvinjiwe kufinyelela ngaphezulu ngemininingwane ephezulu yokuthinta igolide. Izingathekiso zeBotanic zisalokhu zivezwa kahle kulo lonke igumbi, zibuyisela umsindo ophithizelayo ovela emigwaqweni, nakhu iba yingadi eyimfihlo.
Indawo Yokuhlala Yangasese
Sonto 12 Septhemba 2021
Indawo Yokuhlala Yangasese Umqambi wafuna ugqozi kusuka kumhlaba wasemadolobheni. Isikhala sendawo yasemadolobheni exakekile 'yandiswa' endaweni yokuphila, yaphawuleka ngephrojekthi ngesihloko se-Metropolitan. Imibala emnyama yaqokonyiswa ukukhanya ukudala imiphumela emihle yokubuka nomoya. Ngokwamukela ubuciko bokuhlobisa, imidwebo yezindwangu nezithombe zedijithali ezinezakhiwo eziphakeme, umbono wedolobha lesimanje walethwa ngaphakathi. Umqambi wabeka umzamo omkhulu ekuhlelweni kwendawo, egxile kakhulu ekusebenzeni. Umphumela waba likhaya eliwubukhazikhazi nelinokusanhlamvu elalilikhulu ngokwanele ukuba likhonze abantu abangu-7.
Mgqibelo 11 Septhemba 2021
Ubuciko Bokufaka Ugquguzelwe yimizwa ejulile ngokuqonde emvelweni nasipiliyoni njengomakhi, uLee Chi ugxile ekwakhekeni kokufakwa kobuciko obuhlukile kwe-botanical. Ngokubonisa uhlobo lobuciko nokucwaninga ngamasu wokudala, u-Lee uguqula imicimbi yempilo ibe yimisebenzi yobuciko ehlelekile. Ingqikithi yalolu chungechunge lwemisebenzi ukuphenya uhlobo lwezinto zokwakha nokuthi izinto zokwakha zingakhiwa kanjani kabusha ngohlelo lobuhle kanye nombono omusha. U-Lee futhi ukholelwa ukuthi ukuphinda kuchazwe kabusha nokwakhiwa kabusha kwezitshalo nezinye izinto zokwenziwa kungenza isimo sendalo sibe nomthelela ongokomzwelo kubantu.
Stocker Isitulo Mgqibelo 27 Novemba
Reflexio Iphrojekthi Lwesihlanu 26 Novemba
Simplest Happiness Izithombe Zentengiso Lwesine 25 Novemba
Isithombe Esibunjiweyo Yong Kabusha Kwechweba Umbukiso Ukwakhiwa I-Salon Yezinwele Indawo Yokuhlala Yangasese Ubuciko Bokufaka